ngo info | Local Resources Centre
Organization Name Chinland Agriculture Products Company
Contact person Bawi Lian Khum
Contact Address Address: No. 30/1, Taungzalat, Kalay
Phone: +(95)9962534393
+(95)9977962308
Contact Email vanbawi100@gmail.com
Contact Phone 09962534393
Establishment (Year) 2018
Registration status Registered / မှတ်ပုံတင်ပြီး
Function of Organization Technical Support (နည်းပညာ အထောက်အပံ့)
Type of Organization Community Based Organization
Sectors Agriculture (လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး), Income generation (ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများ), Social and economic (လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေး), Vocational training (အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်း), Women empowerment (အမျိုးသမီး စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း), Youth empowerment (လူငယ်ထု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း)
States or Regions , Ayeyarwady (ဧရာဝတီ), Bago (ပဲခူး), Chin (ချင်း), Eastern Shan (ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း), Kachin (ကချင်), Kayah (ကယား), Kayin (ကရင်), Magway (မကွေး), Mandalay (မန္တလေး), Mon (မွန်), Nation Wide (တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ), Nay Pyi Daw (နေပြည်တော်), Northern Shan (ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း), Rakhine (ရခိုင်), Sagaing (စစ်ကိုင်း), Southern Shan (ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း), Tanintharyi (တနင်္သာရီ), Township, Yangon (ရန်ကုန်)
© 2020 All Right Reserved. Powered By New Worth Web Development
Local Resource Centre(LRC)နှငျ့ လကျတ ...
လူငယျမြားနှငျ့ အမြိုးသမီးမြား လူ့အခှ ...
လိငျမှုဆိုငျရာ၊ မြိုးဆကျပှားကနျြးမာရ ...
Dragon Youth Network အဖှဲ့မှ ကရငျပွည ...
Regional Coordination and Adhoc meet ...
Network Coordination Meeting in Noth ...
Three Days Organization Development ...
ဖှံ့ဖွိုးရေးမဏ်ဍိုငျအဖှဲ့မှ ဘားအံ့မွ ...
မျောလမွိုငျမွို့တှငျ ခိုငျမွဲစတေနာလူ ...
English Class for Youth in Mrauk U.
Grant Orientation in Lashio.